Soomaaliya Iyo Kaniisadda Katooliga! Waxaa Tarjumay: Cabdicasiis M. Shidane. | Voice Of Somalia
Inta aan is ku maqannahay innagu, ogaada in nagu la soo maqan yahay. Diin, dhaqan, iyo siyaasad intaba. Waxaa fadeexad ah in ey siyaasiyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul gobaleedyadu ey ogyihiin hawgalladaan ey waddo kaniisadda Katooligu. Wadaadka kirishtanka ah ee wareysiga dhiibay wuxuu sheegay in ey ogalaansho ka heystaan “governo locale” “dawladda maxalliga ah” isaga oo ula jeeda maamulka Soomaalilaand.